macruufka 10: Habee habka furitaanka. Maya badhanka guriga. | Waxaan ka socdaa mac
Applelised | | dhowr
Imaatinka cusboonaysiintaan cusub ee cusub iyo macruufkaan cusub ee 10, waxaan ku aragnay isbeddel weyn shaashadda furitaanka. Caankii caanka ahaa ee "Swipe to Unlock" oo mar caan ku ahaa macruufka ayaa meesha ka baxay. Hadda waa inaad iska dhigtaa faraha oo riix badhanka Guriga.
Dariiq lagu farxo iPhone 6s ama isticmaaleyaal ka sareeya oo ka cawday in fara-gelinta si dhakhso leh loo furo oo aysan si fudud u arki karin waqtiga, sida ay rabeen. Sidaa darteed habka furaha waa la beddelay. Dhinaca gacanta faraha iyo kan kale waxaad geleysaa shaashadda guriga. Ma dooneysaa inaad uga tagto sidii ay ahaan jirtay iyo in kaliya adoo raadsanaya raadadka uu bilaabmayo? Waxaan ku bartay sida loo sameeyo dhowr talaabo oo sahlan. Waxaan horeyba ugu sameeyay qalabkeyga oo dhan.
Furo macruufka 10 si fudud adigoon taaban badhanka
Ugu horreyntii, waa inaad ogaataa siyaabaha hadda loo furay iyo habka loo adeegsado shaashadda qufulka. Saaxiibkey José Alfocea ayaa daabacay laba qoraal oo ka faalloonaya waxtarkeeda iyo isticmaalka aan ka sameyn karno, marka lagu daro hawlgalka ogeysiisyada, ee lagu hagaajiyay cusbooneysiintan.
Waad furi kartaa adoo gelinaya faraha ka dibna garaacaya badhanka bilowga ama si fudud u dhigaya faraha. Si aad u bedesho goobtaan, waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda: Dejinta> Guud> Helitaanka> Badhanka guriga. Qeybtaas gudaheeda, hoos u rog oo waxaad arki doontaa tab awood u siiya ama joojiya ficilka ah inaad riixdo badhankaas. Ku hagaaji qaabkaaga oo ku raaxayso interface-ka cusub iyo dhammaan faa'iidooyinka macruufka 10, nooca ugu fiican ee Apple ee nidaamka hawlgalka moobiilka, labada iPhone iyo iPad, iyo xitaa iPod.
Sidee waxqabadka iyo adeegsiga cusboonaysiintaani isu beddelayaan? Guud ahaan waxaan u maleynayaa inay u shaqeyso sidii hore oo kale iyo aad uga fiican macruufka 9. Waxaan ku arki doonaa noocyada mustaqbalka ee iOS 10 haddii ay sii ahaato mid awood leh oo leh waxqabadkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » macruufka 10: Habee habka furitaanka. Maya badhanka guriga.
Waa salaaman tahay, waxaan hayaa iPhone 5c ikhtiyaarkaasina ma muuqdo, waa maxay dhibaatadu?
in iphone 5c uusan laheyn taabasho id, ikhtiyaarkan ayaa kaliya u shaqeynaya iphone kii ugu dambeeyay ee leh taabashada id, haddii kale ikhtiyaarka uma muuqan doono sidoo kale uma muuqan doono kuwa leh ipod taabashada 6G
Ku jawaab kalotaro
Bixi sida ay u egyihiin AirPod-yada Jet Black